ကနေဒါဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာနှင့် အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်
ကနေဒါဗဟိုဘဏ်၏ အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဇူလိုင်လ ၁၂ရက်နေ့ ၁၇:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ထုတ်ပြန်မည့် အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် ဗဟိုဘဏ်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒရေးဆွဲသူ အကြီးအကဲများ၏ အမြင်ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြီးမှ အတိုးနှုန်း တင်၊ မတင်ကို ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့် ဤအတိုးနှန်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် ကနေဒါငွေကြေး CADအပေါ် သက်ရောက်မှုပြင်းသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ကနေဒါဗဟိုဘဏ်၏ ယခင်လဆွေးနွေးပွဲတွင် ဘုတ်အဖွဲ့အကြီးအကဲများ၏ မှတ်ချက်များအရ တင်းကျပ်သောမူဝါဒဘက်ကို အလေးသာနေသည်ကို တွေ့နေခဲ့ရပါသည်. ထို့ကြောင့်ပင် ယခုဆွေးနွေးပွဲတင် မူဝါဒရေးဆွဲသူများအနေဖြင့် ငွေကြေးမူဝါဒတွေကို တင်းကျပ်သွားမလား။ သို့မဟုတ် လေသံမာမှု အားနည်းသွားပြီး ပျော့ပြောင်းတဲ့မူဝါဒဘက်ကို ယိမ်းသွားမလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါသည်.